Umgangatho ophezulu we-Drywall Screws yoMvelisi kunye noMthengisi | Yanzhao
Izikere zeDrywall ezenziwe ngentsimbi yekhabhoni eyomeleleyo okanye ngentsimbi engenasici zisetyenziselwa ukukhawulezisa i-drywall kwizikhonkwane zeenkuni okanye kwizikhonkwane zesinyithi. Banemisonto enzulu kune ezinye iintlobo zezikrufu, ezinokubathintela ekususeni ngokulula kwi-drywall.
Izikere ze-Drywall zihlala zine-bugle screws zentloko ezinemitya eyahlukeneyo kunye namanqaku abukhali. Ihlelwe ngophawu lomsonto, zimbini iintlobo eziqhelekileyo zemisonto ye-drywall screw: intambo entle kunye nentambo erhabaxa.
Imisonto emincinci eyomileyo enomsonto ineendawo ezibukhali, ezenza ukuba kube lula ukuskrolela kuyo. Zisetyenziswa kakhulu xa kubekwa udonga olomileyo kwizikhonkwane zesinyithi.
Isikere esirhabaxa se-drywall screws zinemisonto embalwa ezenza ukuba zibambe ziqine kwaye zijije endaweni ngokukhawuleza. Zisetyenziswa rhoqo xa ubopha i-drywall kwizikhonkwane zeenkuni.
Ngaphandle koko, izikrufu ezikhethekileyo ezomileyo zenzelwe injongo ethile. Xa uqinisa i-drywall kwizitishi zensimbi enzima, kungcono ukhethe ukuzikrola ngokwakho ngezikrufu, akukho mfuneko yokwenza imingxunya kwangaphambili.
Okwangoku, kukho izikrufu ezomileyo ezidityanisiweyo. Zingasetyenziselwa ukubamba umpu, okhawulezisa ukufakwa.
Ngaphaya koko, kukho izikrufu ezahlukeneyo ezityhidiweyo ezomileyo ezinokukhusela umhlwa.
Izikere ze-Drywall zezona ndlela zilungileyo zokuqinisa i-drywall kwizinto ezisisiseko. Izikere ze-drywall zibonelela ngesisombululo esifanelekileyo kwiindidi ezahlukeneyo zezinto ezomileyo.
Isetyenziselwa ukuqinisa iiphaneli zodonga kwisinyithi okanye izikhonkwane zomthi, isikrufu esomileyo esineentambo ezintle kwizikhonkwane zesinyithi kunye nemisonto erhabaxa yemisonto yomthi.
Isetyenziselwa ukuqinisa iijoyi zentsimbi kunye neemveliso zomthi, ngakumbi ezifanelekileyo iindonga, iisilingi, iisilingi zobuxoki kunye neesahlulelo.
Izikhonkwane ezikhethekileyo ezenzelwe i-drywall ezinokusetyenziselwa izinto zokwakha kunye nokwakha ii-acoustics.
Izikere zentsimbi emnyama ezimnyama zithomile ukumelana nokuthamba kwiindawo ezomileyo. Izikere zentsimbi ezifakwe intsimbi zinciphisa umhlwa kwiindawo ezimanzi. Izikulufu zentsimbi ezomeleleyo ezinganyangekiyo ukubola nokumelana neekhemikhali kwaye zimelana neeyure ezili-1 000 zetyuwa yokutshiza.
d Ubukhulu 5.1 5.5
Okulandelayo: I-Hex bolt
Umtya oLungileyo we-Drywall Screws
Izikrufu zePhillips Bulge Head Drywall
Izikere ze-Phosphated Drywall
I-Oxidation emnyama yeHex Bolts, Din6921 esisangqa Amandongomane, Amandla aphakamileyo eHex Bolts, I-Hexagon Socket Head Bolts, Iibholiti, Ukwaleka okuMnyama kweHex Bolts,